Usuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021 - Imibono Eyiphutha Neqiniso - i-GAAPP
Usuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021 - Imibono Engamanga Namaqiniso
Ikhaya>Usuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021 - Imibono Engamanga Namaqiniso
Usuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021 - Imibono Engamanga Namaqinisoadmin12021-05-12T10:51:46+02:00
Njengengxenye ye- # WorldAsthmaDay 2021 futhi ngokuhambisana nomkhankaso we-GINA's Uncovering Asthma Misconceptions, sicele ochwepheshe bezokwelapha ukuthi babelane ngemibono eyiphutha ejwayelekile mayelana ne-asthma abahlangabezana nayo futhi bayilungise.
Lezi zinsizakusebenza ziyatholakala kuzo zonke izinhlangano zethu ezingamalungu ukuthi zabelane ngazo futhi zingalandwa ngqo kuleli khasi.
Ukulanda izithombe ze-GIF ungachofoza kwesokudla bese ukhetha u- “save image as”.
Umbono oyiphutha 1:
Isifuba somoya asinakuvinjelwa
Ingozi yesifuba somoya iyanda ngokuvezwa kwezinto eziyingozi eziningi, njengokuvezwa intuthu kagwayi, ukudla okungenampilo nokuhlala emadolobheni. Ukugwema izinto eziyingozi (yize kungelula ngaso sonke isikhathi) kuzovimbela amacala amaningi esifuba somoya kubantu.
UProfesa Nikolaos G. Papadopoulos, MD, PhD, FAAAAI, FRCP
UProfesa Wokungezwani Nezokwelapha Nezingane
Ukwahlukaniswa Kokutheleleka, Ukungatheleleki Nemithi Yokuphefumula, IYunivesithi yaseManchester, eManchester, e-United Kingdom
UProfesa ku-Allergology- Pediatric Allergology
Inhloko, i-Allergy Dpt, Umtholampilo Wezingane wesi-2, iYunivesithi yase-Athene, e-Athene, eGrisi
Imingcele ekungezwani komzimba nayo
Ilungu leBhodi lika:
Iqembu Lokuphumelela Kokuphefumula (REG)
I-Global Allergy & Asthma European Network (i-GA2LEN)
Inethiwekhi Yokuphefumula Ye-Syncytial Virus (ReSViNET)
Umbono oyiphutha 2:
Isifuba somoya sibangelwa ukungezwani komzimba noma okungezwani nokwaliwa (isib.
Isifuba somoya sibangelwa yizinto ezahlukahlukene, ezifana nomkhuhlane ovamile, ukungcoliswa komzimba noma izinto ezingezwani nomzimba, ezivame ukuhlanganiswa.
Umbono oyiphutha 3:
Amaphampu e-asthma (ama-inhalers) ayalutha futhi enza buthakathaka amaphaphu. Kufanele zigwenywe noma zisetshenziswe kancane.
Yonke imishanguzo etholakala kuma-asthma inhalers ayiluthisi futhi ayilimazi iphaphu.
Okuphambene nalokho kuyiqiniso: Izingane lapho ukuhlaselwa yisifuba somoya kuvinjelwa khona ukwelashwa okuvamile ngama-asthma inhalers zikhula kangcono emaphashini ebuntwaneni nasebusheni kunalezo ezingakutholi lokhu kwelashwa.
U-Eric D Bateman MB ChB (UCT), MD (UCT), FRCP, DCH (UK)
Ukuhlukaniswa kwePulmonology noMnyango Wezokwelapha, Inyuvesi yaseKapa, ​​eKapa, ​​eNingizimu Afrika
Ilungu lebhodi le-GINA (Global Initiative for Asthma)
Umbono oyiphutha 4:
Iziguli zesifuba somoya kufanele ziyeke imishanguzo yazo ikakhulukazi i-ICS ngesikhathi COVID.
Iziguli ezine-asthma kufanele ziqhubeke nokwelashwa kwazo ikakhulukazi i-ICS ngesikhathi COVID.
USolwazi Wezokwelapha Eziphefumulayo, i-ATSF, iFERS
Isikhungo Sezokwelapha saseCelal Bayar University, UMnyango wePulmonology, IManyisa, eTurkey
Sihlalo Wokumela Abakwa-ERS
Umbono oyiphutha 5:
I-asthmatics ekhulelwe kufanele iyeke imishanguzo yayo ikakhulukazi ama-ICS ngesikhathi sokukhulelwa.
I-asthmatics ekhulelwe kufanele iqhubeke nokwelashwa kwayo ikakhulukazi ama-ICS ngesikhathi sokukhulelwa.
Umbono oyiphutha 6:
Abantu abane-asthma akufanele babambe iqhaza kwezemidlalo ngoba baphefumula kanzima.
Abantu abane-asthma baphefumula ngesikhathi semidlalo ngoba i-asthma yabo ayilawulwa.
Ilungu lebhodi leGAAPP
I-GINA - Initiative Yomhlaba Wonke Yesifuba Somoya
Siyajabula ukwabelana nomnikelo we-GINA´s Wosuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021:
"Ukuthola imibono eyiphutha ye-Asthma".
I-SABA Ngokuthembela, Usuku Lomhlaba Lwesifuba Sama-2021
Imvamisa I-Health Systems yehluleka ukulandela ukuvakashelwa okuphuthumayo ngemuva kokuhlaselwa yisifuba somoya.
Bona ividiyo ekhangayo ngalesi sihloko.
Ukwelashwa Isifuba Somoya
Simema zonke izinhlangano zeziguli, ezisebenza e-Asthma, ukuthi zizuze kwinethiwekhi yomhlaba jikelele ye-GAAPP futhi ibe yilungu!